Kana muine mibvunzo kana nezvemhosva mwana wenyu varipo, ndapota usazeza kuonana Miss S Irvin, Vakapinda Officer pamusoro 01702468047 kana emailing attendance@pgps.porticoacademytrust.co.uk
Kana mwana wako asipo nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, unofanirwa kutiudza nekufonera chikoro ichi 01702468047 (sarudzo 1) mangwanani ekusavapo. Ndokumbira upe zita remwana wako, kirasi uye chikonzero chekusavapo. Ndokumbirawo mutichengetedze isu tichivandudza kana kusavapo kuchizoenderera muzuva rinotevera.
Tinokurudzira kugadzwa kwese kuitwe kunze kwezuva rechikoro. Nekudaro, kana mwana wako asipo kuchikoro nekuda kwekugadzwa, ndokumbira upe hofisi yechikoro tsamba kana kadhi rekugadzwa kuitira kuti kusavapo kunyorwe zvinoenderana.
Kunonoka kutanga kwezuva
Kana mwana achinonoka kutanga kwezuva rechikoro, zvinokanganisa kudzidza kwavo uye kudzidza kwevavakadzidza navo. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti mwana wenyu anosvika nekukasira pane yavo yakapihwa gore reboka nguva pazasi.
Mudzidzi Kushaikwa paChikumbiro Chechikoro
Mwana wako ane chisungo chepamutemo chekuve kuchikoro mazuva 195 pagore. Sezvo pane mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore rekarenda, izvi zvinosiya mazuva zana nemakumi masere ezororo, nzendo uye kushanya. Isu tinoziva kuti, pane dzimwe nguva, mamiriro akasarudzika anomuka. Kana zvirizvo, fomu rekukumbira iri rinoshandiswa kukumbira kuti mwana wako ave nemvumo yekusavapo. Ndiwo mutongo wedare redu rinotonga kuramba zvikumbiro zororo kunze kwekunge zvichitenderwa izvo zvakasarudzika mamiriro
Kukumbira Kusavapo Kwevadzidzi kubva kuchikoro ndapota tinya pano